Uyisebenzisa njani i-App IO yokuhlawula, ukubuyiselwa imali kunye nonxibelelwano 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ukuba siqwalasele ubuchwephesha obusungulwe ngurhulumente wase-Itali ngokuqinisekileyo sivile nge-app entsha ye-IO, Yenziwe yiPagoPA kwaye isimahla inokufakwa kuyo nayiphi na i-smartphone kwaye isetyenziswe ngabo bonke abemi base-Italiya. Abasebenzisi abaninzi bakhawuleze bazifumana besengxakini ngokusebenzisa i-app ye-IO njengoko bebevele bakhuphele usetyenziso kwisixhobo esiphathwayo ngaphandle kokwazi indlela yokuyisebenzisa, yenzelwe ntoni, okanye nokuba ungangena njani, enokubonakala kwangoko. ayinakwenzeka ukuba asikaze sive nge-SPID kunye nokuzazisa kwedijithali (ngelishwa kubalulekile ukuba sikwazi ukusebenzisa usetyenziso lwe-IO).
Kwesi sikhokelo siza kukubonisa Uyisebenzisa kanjani i-IO app yokuhlawula, yokubuyisela imali kunye nonxibelelwano lukarhulumente, ukubanakho ukuhlawula ngokukhawuleza ezivenkileni kunye nokuxhamla kumanyathelo ahambelana nolawulo lwenkcitho kunye nemivuzo ebekelwe abo bachitha imali ethile.
Uyisebenzisa njani iOO app
Isicelo se-IO kulula ukusisebenzisa, kodwa ukuze sikwazi ukusisebenzisa kakubi ngokupheleleyo Okokuqala kuya kufuneka sifumane i-SPID, emva koko uqhubeke nokukhuphela kunye nokufikelela kwisicelo. Kwizahluko ezilandelayo siza kukubonisa indlela yokongeza ikhadi lekhredithi okanye ikhadi elihlawulelwa kwangaphambili kunye nendlela zokufumana izaziso malunga nonxibelelwano nolawulo lukarhulumente.
Sebenzisa i-SPID kwaye ukhuphele usetyenziso lwe-IO
Ngaphambi kokusebenzisa isicelo se-IO kuya kufuneka senze i-SPID, esisiqinisekiso sedijithali esiqinisekiswe ngokuthe ngqo ngurhulumente wase-Itali. Eli khadi likhethekileyo linokufunyanwa kubanikezeli abaninzi, abalinikezela simahla (ke ngekhe siyihlawule nantoni na). Ngoku ababoneleli ababalaseleyo bokuvula i-SPID ngokukhawuleza Ndinguye:
I-PosteID SPID yenziwe
Isazisi se-Aruba SPID
Nawuphi na umboneleli omkhethileyo, mane ugcwalise idatha efunekayo, ukhethe indlela yokuqinisekisa efaneleke kakhulu (umzekelo, kwiPoste Italiane kulungile ukuba uye eposini) kwaye ke ufumane iziqinisekiso ze-SPID, eziza kusetyenziswa kamva kwisicelo se-IO. Ukuba sifuna ukwazi indlela yokwenza inyathelo le-SPID ngenyathelo, siyakumema ukuba ufunde izikhokelo zethu Ungasenza njani isicelo kwaye ufumane i-SPID mi Uyenza kanjani i-SPID: isikhokelo esipheleleyo.
Emva kokufumana i-SPID sinako khuphela usetyenziso lwasimahla lwe-IO lwe-Android kunye ne-iPhone ngqo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kunye neApple App.
Yongeza ikhredithi, ikhadi elihlawulelwa kwangaphambili okanye ledebhithi
Nje ukuba isicelo songezwe kwisixhobo sethu esiphathwayo, sivule, cofa iqhosha Ngena nge-SPID kwaye sikhetha umboneleli we-SPID esenza ngaye ukuba sibe sisazisi esidijithali.
Sifaka ikhowudi yokuqinisekisa, qinisekisa idatha efunyenwe kwi-SPID, emva koko wamkele iimeko zokusetyenziswa kwesicelo. Kwiskrini esilandelayo sikhetha i-PIN enamanani ama-6, sikhetha ukuba senze uqinisekiso lwebhayometri kwaye siqinisekisa idilesi ye-imeyile (esele ifunyenwe kwi-SPID).
Nje ukuba ufake iscreen sakho sesicelo sinokongeza ikhadi lokuthenga ngetyala, ikhadi elihlawulelwa (njengePostepay) okanye ikhadi leATM ngokucinezela ezantsi kwemenyu IsipajiNgokucinezela ekunene phezulu kwento leyo yongezaUkukhetha inqaku Uhlobo lokuhlawula kunye nokukhetha phakathi Ikhredithi, debit okanye ikhadi elihlawulelwa kwangaphambili, BancoPosta okanye ikhadi Postepay mi Ikhadi lokuhlawula iBAMCOMAT. Senza ukhetho ngokusekwe kuhlobo lwekhadi esinalo, emva koko sifaka inombolo yekhadi, umhla wokuphelelwa kunye nekhowudi yokhuseleko lekhadi (i-CVV2, ihlala ingemva). Ekupheleni sicofa Qhubeka ukuqinisekisa ukongezwa kwekhadi kwisicelo se-IO.
Emva kokongeza indlela yokuhlawula esebenzayo kwisicelo se-IO, singena kwimenyu Ngathi Apha ngezantsi ukufumanisa ezinye izinto eziluncedo zeapp: hlawula irhafu yemoto, ukhethe indawo oza kuyichitha kuyo ivawutsha yeholide, fumana izilumkiso malunga Umhla omiselweyo werhafu ye-IMU kunye neTASI, fumana isaziso malunga nokuphelelwa li AMAZWE (irhafu yenkunkuma), ukuhlawula iifizi zesikolo kunye sebenzisa imali.
Ukuba umasipala wethu ukhona phakathi kwabo bakhankanyiweyo (sinako ngokongeza umasipala kwaye sijonge ukuba sidityanisiwe na neenkonzo zePagoPA) siya kuba nakho ukuhlawula phantse zonke iirhafu kwi-intanethi, sisebenzisa enye yeendlela zokuhlawula ezixhaswayo. Ngaba sinomdla kwimbuyekezo yombuso? Kule meko simema wena ukuba ufunde isikhokelo sethu Uyenza njani imali yokubuyisa imali kaRhulumente: amakhadi, iimeko kunye nemida.
Ulufumana njani unxibelelwano oluvela kulawulo lukarhulumente
Ukongeza kwikhadi, ngaba sifuna ukusebenzisa isicelo se-IO ukufumana unxibelelwano kulawulo lukarhulumente? Kule meko, kwanele ukugcina usetyenziso lufakwe kwifowuni, kuba kunxibelelwano ngalunye olutsha luya kuthunyelwa kwiscreen (ukuba izaziso aziveli, jonga useto lokonga umbane, ngakumbi kwi-Android). Ukuze ungaphoswa sisaziso, sinokuthumela imiyalezo evela kwi-IO app kwidilesi ye-imeyile: ukwenza oku, vula nje i-IO usetyenziso kwi-smartphone yakho, ngena nge-PIN okanye nge-biometric access, cinezela ezantsi imenyu IProfayili, khetha imenyu Ukuhambisa imiyalezo nge-imeyile kwaye ekugqibeleni ucinezele kwinto leyo Yenza zonke iinkonzo. Ukuba sifuna ukukhetha ngesandla iinkonzo zokufumana imiyalezo kwibhokisi ye-imeyile, sikhetha into Khetha inkonzo ngenkonzo kwaye ubonise uhlobo lwemiyalezo esifuna ukuyifumana.
Ukuba siqhubeka nokuba neengxaki ngezaziso ze-app ze-IO, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Ukuba izaziso zilibazisekile, cima ukwenziwa kwebhetri ye-Android mi Phucula izaziso ze-Android kwiscreen sokutshixa.
Isicelo se-IO yeyona nto ilungileyo kwinqanaba le-IT elenziwe ngurhulumente wase-Italiya: enyanisweni, isicelo kulula ukusisebenzisa, sidibanisa zonke iinkonzo ze-SPID ikuvumela ukuba ufumane imali ebuyiswe ngurhulumente, wenze iinkonzo zerhafu zisebenze kunye neerhafu kunye nezinye iindlela zonxibelelwano zeziko, ngaphandle kokunxibelelana nedilesi ye-PEC (ethi, nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba iphendule kwimiyalezo efunyenweyo).
Ukuba sifuna ukwenza i-imeyile eqinisekisiweyo yokuphendula kwii-imeyile zeziko, sicebisa ukuba ufunde inqaku lethu. Uyifumana njani idilesi ye-imeyile ye-PEC (imeyile eqinisekisiweyo).
Ukuba, ngokuchaseneyo, sijonga ikhadi elifanelekileyo elihlawulelwa ngokudibanisa nesicelo se-IO, sinokufunda izimvo zethu. Eyona makhadi asimahla asimahla mi Awona makhadi ahlawulelwa kwangaphambili okuthenga kwi-Intanethi ngaphandle komngcipheko.